“မနင်းစကောင်း……………..နင်းစကောင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “မနင်းစကောင်း……………..နင်းစကောင်း”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jun 20, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 39 comments
ဟိုအတော်ဝေးဝေးလွန်ခဲ့တဲ့ ဥပုဒ်တစ်ရက်က ကျနော်ရယ် ကိုသိန်းအောင်ရယ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲသွားစားကြပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ နဲ့ ဥပုဒ်နေ့ တိုက်နေတာရယ် မနက်ကိုးနာရီစွန်းစွန်းလောက်ရယ်ဆိုတော့ ခေါက်ဆွဲလာစားတဲ့သူအတော်များတယ်ပြောလို့ရပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော်တို့ဝိုင်းနဲ့ ဟိုဘက်စားပွဲဝိုင်းမှာတာတွေကိုပြောင်းပြန်ချမိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဟိုဘက်ဝိုင်းက လင်မယားကိုတော့ ကြက်သားနဲ့မှာတာကို ၀က်သားနဲ့သွားချပါတယ်။
စားပွဲထိုးလေးက မှားချတာသိလို့ မုန့်ပန်းကန်ချင်းလဲပေးမယ်လုပ်တော့ ဟိုဘက်ဝိုင်းက မုန့်တွေကိုနယ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့လဲပေးလို့ မရတော့ပြန်ပါဘူး။
အဲတော့ စားပွဲထိုးလေးခင်ဗျာ မှားချတဲ့မုန့်တွေပြန်ယူသွားရပါတယ်။
“ ပြန်လဲခိုင်းလိုက်ရတာဘဲ သူတို့မှားချတာဘဲဟာ”လို့ပြောတော့
“နေပါစေ့ကွာ နို့မဟုတ်ရင် ကလေးတွေလခထဲက အဖြတ်ခံရမှာ၊
သူတို့မှားတာ ပေမယ့် မနင်းချင်ပါဘူး”လို့ပြန်ပြောပါတယ်။
ကိုယ်စားချင်တာ မစားရတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ဖီလင်အောက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ တော့ ကျနော်ရယ် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရယ် လက်ဖက်ရည်သွားသောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နဲ့ဘေးဘက်က ၀ိုင်းမှာတော့ ကောင်လေးတွေရောကောင်မလေးတွေအုပ်စုလိုက်ကြီးထိုင်နေကြပါတယ်။
ဟိုအဖွဲကလဲ သူတို့မှာတာမဟုတ်လို့ မယူဘူးလို့ပြော။
ငါမှန်တယ် သူမှားတယ် ငြင်းရင်းကနေ အခြေအတင်ဖြစ်လာပါတယ်။
သူတို့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်နေတာကို ဆိုင်ရှင်သိသွားတော့ ကောင်လေးကိုဆူပြီး သူတို့လိုချင်တာနဲ့လဲပေးလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်က “နင်မှာတာ မက်စ်လေ”လို့ပြောတော့
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က “ဟုတ်တယ်လေ ငါစိတ်ပြောင်းသွားလို့ ပြောင်းမှာလိုက်တာ”လို့ပြန်ဖြေသံကြားလိုက်ရပါတယ်.။
“နင်လုပ်တာက ကောင်လေးကြားညှပ်သွားတာပေါ့”လို့ပြောတော့ 
နောက်ဆက်တွဲစကားသံလေးက “ငါတို့ကအများကြီးဝိုင်းမှာတော့ ငါလိမ်ပြောလိုက်တာ သူတို့မသိလောက်ပါဘူး”တဲ့။
“နင့်လ ခထဲက တစ်ဝက်ဖြတ်မယ်”လို့ပြောသံလေးခပ်သဲ့သဲ့ ကြားမိသလို။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးတွေကိုတွေးမိတော့ ကိုအောင်မောင်းတို့အလုပ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာလေးတစ်ခုကို
ဒါကလဲ ကိုအောင်မောင်ပြန်ပြောပြလို့ ကျနော်သိရတာပါ။
ကိုအောင်မောင်းတို့ဆီမှာရောင်းတဲ့ သကြားအိတ်တွေက အမျိုးအစားကိုလိုက်လို့ ဈေးကွာပါတယ်။
ဂရိတ်ဝမ်းနဲ့ဂရိတ်တူး ဆိုရင် ၀မ်းက နည်းနည်းလေးပိုပြီး ကွာလတီကောင်း ပိုဖြူပြီး တူးကတော့ နည်းနည်းလေးညိုပါသတဲ့။
ကိုအောင်မောင်းတို့ အရောင်းဌာနက မြို့ထဲမှာ။
မြို့ထဲကဆိုင်ကရောင်းထားတာ ကို ဂိုဒေါင်မှာသွားထုတ်ရပါတယ်.။
အဲတော့ အရောင်းဌာနကနေ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်အိတ်လာသယ်မယ်ဆိုတာကို ဖုန်းနဲ့စာရင်းပေးထားပါတယ်။
တစ်ခါသားမှာတော့ မန်းလေးမြို့တောင်ဘက်က မြို့လေးတစ်မြို့က နေ သကြားအိတ်တစ်ရာ လာတင်တဲ့အခါ
ဒုတိယတန်းစား ၀ယ်တာကို ပထမတန်းစားနဲ့မှားတင်ပေးလိုက်ပါသတဲ့။
အဲဒီကုန်လာတင်တဲ့ကား ထွက်သွားပြီးသိပ်မကြာခင်လေးမှာလက်ခံနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တော့ မှ မှားတင်ပေးတာသိပါသတဲ့။
သိ သိချင်း ပစ္စည်းမှားတင်မိတဲ့အကြောင်း ၀ယ်ထားတဲ့ကုန်သည်ဆီကို လှမ်းပြောတော့
“ကိုယ်ပေ့ါဆလို့ ဖြစ်တာ ကိုယ်ခံပေ့ါ”လို့ပြန်ဖြေပါသတဲ့။
တစ်အိတ်ငါးရာ အိတ်တစ်ရာ ငွေငါးသောင်းဆိုတော့ ဂိုဒေါင်ကလူတွေလဲပျားတုပ်ကုန်တာပေါ့။
အဲဒါနဲ့သူတို့လဲ သူတို့အထက်ကမန်နေဂျာဆီ ဒီလိုမှားသွားတဲ့အကြောင်းလှမ်းအသိပေးရတော့တာပေါ့။
မန်နေဂျာလုပ်တဲ့သူကလဲ အကိုတို့ဆီမှာမှ မရောက်သေးတာ အချိန်မီပါသေးတယ်ပြောတော့
ဒီတော့ ပိုင်ရှင်ကလဲ မှားပါသွားတဲ့လူဆီကို ဖုန်းနဲ့လှမ်းဆက်သွယ်ပါတယ်။
သူလိုချင်တဲ့ အမျိုးအစားကို နောက်ထပ် ပို့လိုက်မယ့်အကြောင်း၊
အခုမှားပါသွားတဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဟာကိုလည်း ရောင်းပြီးမှ ငွေပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်း၊
တကယ်လို့မယူခြင်ဘူးဆိုရင်လဲ ပစ္စည်းကို မန်းလေးပြန်ပို့ပေးဘို့အကြောင်း
ဒီမှားယွင်းမူ့အတွက် ၀န်ထမ်းက ကျခံရမှာဖြစ်ကြောင်း
မှားယွင်းမူ့အတွက် တောင်းပန်ပါကြောင်းပြောပေမယ့်လဲ ဟိုသူကတော့
ကားပေါ်က ပစ္စည်းတွေကို ကြိုရောင်းထားပြီးသားလို့ပြောပါတယ်။
အားလုံးတောင်းပန်တာတောင်မှ မရတော့ ကိုအောင်မောင်းတို့ဆရာကလဲ
“ထားလိုက်တော့ကွာ”လို့ပြောပေမယ့် စိတ်တွေ တိုပြီး မျက်နှာကတော့ နီရဲနေပါတယ်။
မှားတင်တဲ့သူတွေကိုလဲ လစာထဲက အချိုးကျဖြတ်ပြီး ကွာခြားသလောက်ကို အလျော်ခိုင်းပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး အဲဒီလူကုန်ဝယ်တယ်ဆိုရင် ကိုအောင်မောင်းတို့ဆရာ ကိုယ်တိုင်ရောင်းပါတယ်.။
“ငါတို့ဖက်က မှားတာတော့ မှားတာပေါ့ကွာ။
သူများအပေါ်မှာနင်းတတ်တဲ့လူတန်းစားမျုိုး က မယုံကြည်ရတဲ့လူမျိုး၊
မမြင်မတွေ့ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကျနော်တို့နေထိုင်ရာမြို့လေးဆီကို လာမယ်လို့အကြောင်းကြားတော့
သူ့အတွေးသူ့အရေးတွေကို ကျနော်တို့က တစ်ဖက်သတ်လေးစားနေရတဲ့သူ။
လူခြင်းတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးဘဲ လေလှိူင်းများကြားကအသံလေးတွေ စကားလုံးလေးတွေက တစ်ဆင့် ရင်းနှီးနေသူ။
သူမလာခင်ကတည်းက ကျနော်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စု မှာ ဧည့်ဝတ်ကျေစေရေးအတွက် တိုင်ပင်ကြရ ငွေစုကြနဲ့ပေါ့။
ဘလူးဆို ဘလူး ရက်ဆိုရက် ဧည့်ဝတ်မပျက်စေရပါဘူး။
“စကား စကားပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ”ဆိုသလိုပါဘဲ သူ့အပြော သူ့အမူအယာတွေက
သောက်ရင်းမ၀တော့ ထပ်မှာ ။
ဒါနဲ့ဘဲပိုက်ဆံရှင်း သူအိမ်အပြန်လမ်းမှာ အမူးပြေလာ။
ကျနော်တို့ ညတစ်ချက်ထိုး(ဖော့ပြောရင်တော့ မနက်စောစော) အိမ်ပြန်ရောက်ပါတော့တယ်။
သူပါးစပ်ဟတာနဲ့ ကျနော်တို့က အကုန်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီး ဧည့်ဝတ်ကျေကြပါတယ်။
အညောင်းဖြေ အငြာပြေဆိုပြီး မာဆတ် ပါလိုက်ပို့ပေးရပြန်တော့
ကျနော်တို့အဖွဲ့ကလည်း လူစုလို့သူ့ကိုဧည့်ဝတ်ကျေဘို့ စီစဉ်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူခဏလေးလာတာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဆက်ပြီး ဧည့်ဝတ်ကျေဘို့လုပ်ရပြန်ပါတယ်။
ငွေကုန်လူပန်းတာထက်စိတ်ညစ်တာကတော့ သူ့စကားလုံးအကြီးကြီးတွေက ကျနော်တို့နားနဲ့မဆန့်တာပါဘဲ။
ဒီမြို့ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာ မူတည်လို့ ဘ၀ကိုထိန်းကျောင်းမောင်းနှင်နေရသူ။
သူက သူတို့ရဲ့ဝေးရပ်မြေက အခြေအနေတွေနဲ့နှုိင်းယှဉ်လို့ ကျနော်တို့ကို ညံ့လိုက်တာဗျာ ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးဘဲနဲ့
ကိစ္စတစ်ခုရယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်ရင် သူနေရတဲ့ အနေအထားနဲ့ချိန်ထိုးလို့ ပြောတတ်ပြန်ပါတယ်။
“အော်ခဏလာသူဘဲလေ”ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က သည်းခံရပြန်ပါတယ်။.
လေးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ သူက ဘိုဆန်ဆန်ပါဘဲ။
“Return bonus “ပါတဲ့။
စားလိုက်သောက်လိုက် စကားပြောလိုက် ငြင်းလိုက်ခုံလိုက်နဲ့ အချိန်အတော်လေးရင့်လာတဲ့အခါမှာတော့
စားပွဲပေါ်က အမြည်းပုဂံတွေကလဲ အလွတ်။
စာရွက်လေးရလာတော့ ဒကာတော်ရှေ့ကိုထိုးပေးတော့ တစ်ချက်ကြည့်ပြီးဟိုဘက်လှည့်သွား။
ဒီမှာအားလုံးက သဘောပေါက်သွားတော့ ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေကြွက်စု စုပြီးရှင်းလိုက်ကြ။
သူရယ် နောက်တစ်ယောက်ရယ်က တက္ကစီတစ်စီးငှားပြီးပြန်သွား။
ကျန်တဲ့သူတွေက တော့ တစ်ယောက်စီလမ်းခွဲ။
နောက်ဆုံးကျန်တဲ့သူနှစ်ယောက်မတော့ ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံက တက္ကစီခမလောက်။
ဒါနဲ့ဘဲ အိမ်ကလူကိုလှမ်းခေါ် ပြီး လာကြိုဘို့မှာရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းကတော့ ကိုဧည့်သည်နဲ့ အတူပြန်တဲ့မြို့ခံ က
အညောင်းဖြေဘို့မာဆတ်သွား စိတ်တွေလန်းဆန်းလာတော့ ကေတီဗွီကိုခရီးဆက်။
အဲဒီမသွားခင် မြို့ခံလူက သူ့မိတ်ဆွေဆီကို လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်လို့ ပိုက်ဆံချေးရပါသတဲ့။
နောက်နေ့မနက်ရောက်တော့ ကျနော်တို့ တစ်တွေအားလုံး မတိုင်ပင်ဘဲ ဖုန်းပိတ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့ရှိသမျှငွေလဲကုန် စိတ်လဲကုန် ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားလို့ပါ။
သူပြန်တဲ့ထိလဲ ကျနော်တို့က သူ့ကို ထပ်တွေ့ဘို့မကြီုးစားတော့ပါဘူး၊
နောက်ဆက်တွဲသတင်းကတော့ ကိုဧည့်သည်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာတာကို
ကားစိုက်လူစိုက် ဆီစိုက်နဲ့ လုပ်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်တဲ့။
နောက် ချေးထားတဲ့ပိုက်ဆံလဲ ဆပ်မသွား တော့ မြို့ခံလူကဘဲ စိုက်ထားလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘဲကြားလိုက်ပါတယ်။
လူဆိုတာ ကိုယ်အသာစီးရချင်တာတော့ သဘာဝပါဘဲ.။
ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံရတာ လို့ ဖြေသိမ့်နိုင်ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်တယ် မလွှတ်ဘူးဆိုတာကတော့ အသာစီးရသွားသူရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းပါဘဲ။
စားပွဲထိုးကောင်လေးလို ကိုယ်ထက်န်ိမ့်ပါးသူ မှန်းသိပါရဲ့နဲ့ မမှတ်မိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ဖိနင်းလိုက်တာမျိုးကတော့
ပိုဆိုးတာကတော့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို တာဝန်ကျေချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ချစ်ခင်စိတ်အပေါ်မှာအခွင့်အရေးယြူုပီး
နင်းထည့်လိုက်တဲ့သူမျိုးကတော့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ သိမ်ဖျင်းတဲ့လူတန်းစားလို့ဘဲသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် ရုံးက ကလေးတစ်ယောက်က ဖုန်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ဖုန်းဆိုင်သွားကြပါတယ်။
ကျနော့်ကောင်လေးတွေ ဟန်းဆက်ရွေးနေတုန်းကျနော်က ဘေးနားကခုံမှခဏထိုင်နေပါတယ်။
ဖုန်းအသစ်နံမယ်ပေါက် နံပါတ်ကောင်းတာ ရှားတာက နှစ်သိန်းနှစ်ထောင်ကျပ်
ဘာနံပါတ်မှမရွေးဘူး ကြုံရာကျဘမ်းယူဆိုရင် တစ်သိန်းကိုးသောင်းရှစ်ထောင်။
နံပါတ်တွေကြည့်ကြ ပြုကြ စကားတွေပြောကြနဲ့ အတော်ကြာတာတောင်မပြီးနိုင်။
တစ်ယောက်ကလေးထောင်လေးကွာတာကြည့်မနေနဲ့ နံပါတ်လှတာယူ ဆိုတိုက်တွန်းသူကတစ်ဖက်။
ဖုန်းပြောလို့ရပြီးတာဘဲ လေးထောင်ဆိုလဲလေးထောင် ဘီယာသောက်ရတာပေါ့ လို့ ပြောသူကပြော။
နောက်ဆုံးတော့ ဟိုလူက နံပါတ်မရွေးဘူးကွာ လို့ပြောလိုက်လို့ ကဒ်ချိုးမယ်လုပ်ရော ကောင်တာထဲကို
ဟန်းဆက်ထဲ ထည့်မယ်ဆိုပြီးသေချာပြန်ကြည့်လိုက်မှ 9လေးလုံးပူးနေတဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေတာသိလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ အရောင်းကောင်လေးက သူတစ်ဝက်စိုက်မယ် 2သိန်းတော့ပေးပါပြောတယ်။
ဟိုဘက်အုပ်စုကလဲ မင်းတို့ဘာသာ မှားချိုးတာ မယူဘူး၊
ကဒ်ချိုးပြီးသားဆိုပြန်တော့လဲ သူများပြန်ရောင့်းရင်ခက်မယ်ဆိုတော့ ကောင်းလေးတွေမှာအတော်အခက်တွေ့ပုံရ။
အဲဒီအချိန်ကျနော့်ဘေး ကဖုန်းပြောနေသူကလဲ အာကျယ်ပါကျယ်။
“ကိုရင် လာသာလာခဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းဆက်လိုက် လာခေါ်မယ်။
ဒီလူနဲ့ဒီလူဗျာ အဝေးကပြန်လာတဲ့လူအပေါ်ကျုပ်တို့က ဧည့်ဝတ်ကျေအောင်ထားမှာပါ။
ပြန်သာလာရတယ် ကျနော်စိတ်က ဖုန်းဆိုင်ထဲမှာကျန်နေခဲ့ပါတယ်.။
ရွှေဧည့်သည်ကို မျှော်နေတဲ့ ကိုအာကျယ်လဲ ကျနော်တို့လို့အနင်းမခံရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးနေမိပါတယ်။
အခုတလော မန်းလေးမှာ ဖုန်းဟန်းဆက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေအတော်လေးလူစည်ကားပြီး
တစ်ရက်ဖုန်းဆိုင်လေးကို အဖော်လိုက်သွားရင်း လူတစ်စုငြင်းခုန်နေကြတာကိုမြင်ရာကနေ
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကိုယ်ရေးလို်က်တဲ့စာတွေထဲမှာ ကိုယ်မှားတဲ့အကြောင်းတွေကိုရောသူများမှားတဲ့အကြောင်းတွေ
သူက ကျနော့်ကို မမှားအောင် သင်ပေးသွားတယ်လို့ခံယူပါတယ်။
ကျုပ်တော့ မသိ။ ကြုံဖူးသူတွေ လာမန့်မှ သေချာမှတ်ရမယ်။
ကိုပေါက် စာက ဖြစ်ရပ်မှန်မို့ထင်တယ်
ဖတ်အပြီး အတွေးပွားစရာတွေရလို့… တွေးဖို့လစ်ပြီဗျို့
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အမျိုးမျိုးဆိုတာ အရမ်းမှန်တယ်နော်၊ ကြည်ဆောင်းကတော့ စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ် ။ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ရင် တချိန်မှာ ကံတူအကျိုးပေးဆိုတာ အနှေးနဲ့ အမြန်ဆိုသလို လါမှာပါဘဲ။
လေးပေါက်ရေ…. စာပွဲထိုးကို ညာတဲ့ကောင်မလေးနဲ. သကြားအိတ်မှား တာကို ဗြောင်ယူတဲ့ ပိုင်ရှင် တွေ ……အခြားအခြားသောသူတွေ………… ဖတ်ရင်းစိတ်ကုန်မိပါတယ်………
ဒီပို.စ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ. တစ်ခုတော့ ရလိုက်တယ်………. အော် ပညာတတ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်ရင် သူများထက်ဆိုးတယ် ဆိုတာလေးပါ……………..
လောကမှာ ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာ ပညာတတ်တာ မတတ်တာက တစ်ပိုင်း။
အဓိက ကတော့ ကိုယ်က မနင်းမိဘို့ရယ် ရှောင်နိုင်ဘို့ရယ်ပါဘဲ။
ံကြုံဖူးပါတယ်လေးပေါက်ရေ။ ကျွန်မခရီးသွားတော့ အဲဒီသွားတဲ့မြို့က ပစ္စည်းကို ရောင်းဖို့ဆိုတယောက်က မှာတာ။ ပိုက်ဆံစိုက်ထားလိုက်ပါတဲ့။ ရောင်းပြီးကုန်မှပေးမယ်ဆိုပြီး သိန်းချီစိုက်ထားရပါ တယ်။ နှစ်လလောက်နေမှ ပိုက်ဆံပေးတော့ သူသုံးဖို့ရယ် သူက သူများကိုလက်ဆောင်ပေးတာရယ်နှုတ်ပြီးမှ ကျန်တာပေးပါတယ်။ ဒါကတော့လက်ရှိနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလေးပါ။ ရှေ့တွေမှာလဲ ထိုနည်း လည်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲလေးပေါက်ရဲ့စာကို ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ဖတ်သွားပါတယ်။
နောက် ဆို ၇င် သတိထား၇မယ် အချက် ကလေးတွေကို ပြောပြသွားတဲ့ ကိုပေါက် ကို ကျေးဇူးအထူတင်ပါတယ်
လေးပေါက်ရေ အဲလိုအဖြစ်တွေကတော့များတယ်ကိုယ်တိုင်လဲကြုံတွေ့ ဘူးပါတယ်
ခေါက်ဆွဲစားတိုင်းမှားတာလဲခဏခဏပါပဲ မှားတိုင်းလဲအားနာလို့ ကြိတ်မှိတ်စားလိုက်ရတယ်
မရတော့တာ အဲလူကလဲအတော်ချမ်းသာတဲ့သူပါပဲ ။ နောက်ပိုင်းတော့အဲလူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်အတော်သတိထားရတော့တယ်။
လောက မှာ လူ အမျိုးမျိုး ၊ စိတ် အထွေထွေ ဆို သလို ပဲပေါ့။လူတွေ ဟာ အချင်းချင်း ဆတ်ဆံ ကြ တဲ့ နေရာ မှာ ဘာကြောင့် များ ကိုယ် ချင်းစာ တရားကို မေ့ လျော့ နေကြတာပါလိမ့်နော်။
စာရေးဆရာကတော့ ဆရာဖေမြင့်လားမသိ၊ သေချာမမှတ်မိတော့
အဲ့ဒီမှာရေးထားတာက ဥပမာလေးပေ့ါ၊ လူ၁၀ယောက်ရှိတယ်အခန်းထဲမှာ လူ၁၀၀ရှိရင်
သဘောကတော့ နင်းမလား၊ အနင်းခံမလား၊ ဒါပဲ၊
(အဓိက ကတော့ ကိုယ်က မနင်းမိဘို့ရယ် ရှောင်နိုင်ဘို့ရယ်ပါဘဲ။) ဒါကအကောင်းဆုံးပါပဲ
ဒါပေမယ့် နှစ်လမ်းပဲရွေးစရာရှိရင်တော့ တစ်ခုခုလုပ်ရမှာပဲနော်
လေးပေါက်တို့က အတွေ့အကြုံများတော့ ပိုနားလည်မှာပေ့ါ
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ပန်ပန့်သူငယ်ချင်းမလေးက အာရပ်စော်ဘွားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက စားသောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာ
သူတို့ဆီမှာက ၀က်သားကို ဝေရာမဏိဆိုတော့ လုံးဝမကြိုက်ကြဘူး
အဲဒီမှာ အာရပ်မျိုးနွယ်တစ်ယောက်က စားစရာမှာတာ လာချပေးတော့ အထဲမှာ ၀က်သားဖတ်ကလေးတစ်ဖတ်တွေ့သွားရော
ဒါနဲ့ပဲ အဲ့ဒါချက်တဲ့ စားဖိုမှူးကိုခေါ်ခိုင်းပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်သတဲ့
လေးပေါက်ရဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုဖတ်ပြီး သွားသတိရမိလို့ပါ
ကိုယ်က၀က်သားမှာလို့ ကြက်သားလာချပေးတယ်၊ ကြက်သားလည်းစားတဲ့လူဆို ကိစ္စမရှိပေမယ့်
၀က်သားမစားတဲ့လူကို ၀က်သားမှားပြီးလာချပေးရင်တော့ ဒွတ်ခနော်
ဟုတ်တယ်ဗျ မန္တလေးက အန်ကယ်ဦးလေးပေါက် ပြောတာ ထောက်ခံတယ်
( ကိုယ်မှားတဲ့အကြောင်းတွေကိုရောသူများမှားတဲ့အကြောင်းတွေ ကိုပါရေးမိတတ်ပါတယ်။ )
ဒါကောင်းတယ် မန္တလေးက အန်ကယ်ဦးလေးပေါက်
ကျနော်ဆို ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးတယ် ဘာမှမမှန်တဲ့အတွက် ဘာမှမကောင်းဘူး
ကိုပေါက်လက်ဆောင် အတွေးပါးပါးလေးပေမယ့် အရှည်ကြီးစဉ်းစားစရာတွေအပြည့်ပါ။
– Order မှာသူ (Customer) ကလည်း ကိုယ်သုံးဆောင်ချင်တာကို သေချာစဉ်းစားပြီးမှာဖို့လိုသလို Order Taker ကလည်း (Waiter) အော်ဒါတိတ်ကာနုပ်နဲ့ သေချာရေးမှတ်ရင် အားလုံး OK မှာပါ။
– အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စကတော့ Double Check လုပ်သင့်ပါတယ်၊ ကုန်မတင်ခင် ကုန်ပြေစာနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ သေချာစွာတိုက်၍ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မနစ်နာဖို့ပါ။
မအိ ကို နင်းမယ့်လူတွေထဲမှာ
မောင်ပေ လုံးဝ လုံးဝ မပါပါဘူးနော်
စိတ်ချလက်ချ ဂေဇက်ကို လာခဲ့ပါဗျာ။ ဟီဟိ
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်. နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်.. မဟုတ်..။
(သဘော ကျတယ်ဗျာ) —-> ဒါက သူကြီး comment အတွက် … ဦးပေါက် ရေ .. နောက်မှ ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာ …
ဒါလူတစ်ယောက်ခြင်းရဲ့ အနိုင်ယူလို အသာစီးယူလို့တဲ့စိတ်ရယ် မသိတတ်တဲ့စိတ်ရယ်ပေါ့။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. တိုးတက်မှုတွေဆုတ်ယုတ်စေတဲ့.. အဓိကအကြောင်းတွေထဲ.. အဓိကတရားခံဟာ.. စနစ်မဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. ထပ်ခါရေးနေရတာပါ..
နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့.. နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်… ဆိုတာမျိုးက.. ၁၀၀မှာ.. ၅၀မရှိလောက်ဘူး..
မြန်မာပြည်တိုးတက်စေချင်ရင်..မြန်မာတွေအောင်မြင်စေချင်ရင်.. ရှေးစွန်းစွဲအတွေးအမြင်.. သင်ကြားမှုတွေ.. အကျင်စရိုက်တွေ…. ချန်ထားခဲ့မှဖြစ်လိမ့်မယ်..
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က.. ဒါကိုရိပ်မိသိနေဟန်ရှိတယ်..။ သူမိန့်ခွန်းတွေမှာ.. ရှေးရိုးစွဲတွေ.. ထားခဲ့မယ့်အကြောင်း.. ပါတတ်တယ်..။
ရှေးစွန်းစွဲတွေမွေးထုတ်တဲ့..အဓိကလက်သည်တခုဖြစ်တဲ့.. လောကနီတိအကြောင်းတော့… ကျုပ်မပြောတော့ဘူး..
မြန်မာနိင်ငံမှာ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည် ရတဲ့အကြောင်းက အာဏာရှင်စနစ်ယဉ်ကျေးမှု ရှိနေလို့ ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုသွပ်သွင်းထားတဲ့ စဏကျရဲ့ လောက နီိတိဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကိုမိုးသီး က ရဲရဲရင့်ရင့်ဝေဖန် ထားတယ်။ လောကနီိတိကို သူလိုစနစ်တကျပိုင်းခြားဝေဖန်မှု သမိုင်းမှာမရှိသေးဘူး။ ဒီမှာကလစ် ။ ဒါကိုဖတ်။ စာအုပ်အနေနဲ့ ဖတ်ခြင်သူတွေအတွက် ၁၀ ဒေါ်လာ နဲ့ ဝယ်ယူအားပေးနိင်တယ်။
စားသောက်ဆိုင်မှာ စားစရာမှာရင် မှာသူရဲ့ အော်ဒါကို
စားပွဲထိုး သို့မဟုတ် စားသုံးသူ ကိုယ်တိုင်ရေးရပါတယ် ( စနစ် )
ရေးပြီးမှာပါလျှက်နှင့် မှားရင်တော့ အော်ဒါစာရွက်က ဆုံးဖြတ်ပါတယ်
မှားပေမယ့်လို့ တစ်ဖက်က ကြေအေးရင် ( လူ ) ပြေလည်ဘါဒယ်
ဆိုလိုဒါက လူနှင့် စနစ်ဟာ ဒွန်တွဲနေဘာဂျောင်း
ခြေတော်ဦးခိုက် နှုတ်လှံထိုး ခံပက်ဘာဒယ်
မိုက်ကယ်ပုက လွန်တာရှိရင် ၀န္ဒာမိ ပါလို့ ချို (ဂျို) ကိုင်ပြီး တောင်းပန်သွားပါသည်။
ကိုပေါက်ရဲ့လက်ဆောင်အတွေးပါးပါးလေးပေမဲ့ တော်တော်ကြီးရင်ထဲကိုထိမိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။
ကိုယ်က သူများကို မနင်းမိအောင် အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ်
ရှောင်ရင်းနဲ့ သူများကိုယ့်ကို နင်းသွားတာတွေလဲကြုံဘူးပါရဲ့ :-(
မေတ္တာတရားရှေ့ထားမိတော့ သူတို့ အလံဖြူပြရင်
လေးပေါက်ရေ … ။
ဆိုင်တွေမှာ… မှာလို့ မှားချတာက … ကာစတမ်မာဘက်က ဂဂျီဂဂျောင်ကျတာဖြစ်နိုင်သလို … စားပွဲထိုးတွေရဲ့ ပေါ့လျော့မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် .. … ။ ဘယ်သူ့အမှားပဲ ဖြစ်ဖြစ် စားပွဲထိုးက စိုက်လျှော်ဆိုတာကတော့ ဆိုင်ရှင်ဘက်က တာဝန်မဲ့ရာ ကျလွန်းပါတယ် … ။ စားပွဲထိုးဆိုတာ သူ့ဆိုင်က ၀န်ထမ်းပါ .. သူ့လက်အောက်က အလုပ်လုပ်သူပေါ့ … ဒီလို လူတွေအတွက်ကို ပိုင်ရှင်၊ရှယ်ယာရှင် ၊ အထက်လူကြီးတွေက လုံခြုံမှု ၊ စောင့်ရှောက်မှု ပေးရမှာပါ ။ အဲ့ဒီလို လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံမှု မပေးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ .. အလုပ်မသင့်ဘူး …. ။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းက နားကြားလွဲတတ်လျှင် သေချာအောင် ရေးမှတ်တတ်ဖို့ အလေ့ကျင့်လေးလုပ်ပေးရမယ် …. ။ တချို့သော ဆိုင်တွေမှာ …. စားပွဲထိုးက စာရွက်နဲ့ ရေးမှတ်ပြီး … အားလုံးမှာပြီးတဲ့အခါ သူမှတ်ထားတာတွေကို တခေါက်ပြန်ရွတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေ လုပ်ထားပေးတယ် … ။ အဲ့ဒီလို လုပ်ရမှာပါ … ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုင်ရှင်၊ မန်နေဂျာ ၊ စူပါဗိုက်ဆာတွေက စားပွဲထိုးမှားတာနဲ့ မညှာမတာ ဖြတ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲကများတယ် …. ။ တာဝန်မဲ့ရာကျလွန်းပါတယ် အဲ့ဒီအပြုမူက ….. ။ ကိုယ့်ဆိုင်က၀န်ထမ်းရဲ့ တာဝန်ယူတတ်မှုက .. အလုပ်ချိန်၊ အလုပ်ခွင်တွင်း ကိုယ့်အပေါ်မှာတူညီစွာသက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ …. တာဝန်ရှိသူတွေ မေ့နေကြတယ် … ။
အောက်ကြည့်မြင်တိုက်လမ်းပေါ်က … orange ဆိုင်လေးဘေးမှာ ကပ်ဖွင့်တဲ့…. အစားသောက်လမ်းဘေးဆိုင်လေးဆိုလျှင် .. မှားပြီးချတဲ့အခါ …. စားပွဲထိုးကို မဖြတ်ပါဘူး … စားပွဲထိုးတွေ မျှ စားခိုင်းတာပါ … ။(တကြိမ်နှစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘူး .. ညတိုင်းလိုလို အဲ့ဆိုင်ရောက်လို့ သိနေခဲ့တာပါ) ဒီဆိုင်က သူများတွေလို အကြီးကျယ်ကြီးလည်း မဟုတ်ပေမယ့် … အလေလွင့်တန်ဖိုးထက် … စည်းလုံးမှုရဲ့ တန်ဖိုး ၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုပြီး အလေးထားပုံရတယ် …။ အလုပ်သမားတွေကလည်း မှားမှာလျှင် ငါတို့ စားရတာပေါ့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမထားကြတာလဲ သဘောကျစရာပါပဲ …. ။ မှားမှာလျှင် နောက်မမှားအောင် ဂရုစိုက်ကြတယ် .. လုပ်ငန်း သေးတာ ကြီးတာနဲ့ မဆိုင်ပဲ .. အလုပ်ခွင်ထဲက တာဝန်ယူမှုအပိုင်းလေးတွေကတော့ သဘောကျစရာကောင်းတယ် လေးပေါက်ရေ …. ။
မနင်းစကောင်း …. နင်းစကောင်းဆိုတော့ လေးပေါက် စက်ဘီးစီးသင်တဲ့အကြောင်းမှတ်လို့ ။
လေးပေါက်ရေ အရင်တုန်းက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ကြရင် ဦးနှောက်နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ပါလို့ MBA ဘွဲ့ရတွေကို ဆရာ့ဆရာကြီးများက သင်ကြပါတယ်တဲ့။ သဘောကတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရဖို့ တခုထဲ တဘို့ထဲကို ဦးတည်ပြီး သင်ပေးခဲ့တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ 2008 ဘဏ်စီးပွားရေးပျက်ကပ်တွေ က စပြီး အားလုံး လိုက်ဆင်းသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ပါမောက္ခများက ပြောကြပါတယ်တဲ့။ ငါတို့ သင်တာ မှားသွားပြီ။ ဒါငါတို့အသင်မှားလို့ ဖြစ်တာလို့ ပြောကြသတဲ့။
ဒါကြောင့်မို့ ၂၀၀၉ နောက်ပိုင်းက စပြီး ပြီးတဲ့ ဟားဗတ်က MBA ဘွဲ့ရတွေကို သင်ပေးရာမှာတော့ အလုပ်လုပ်ရင် Head & Heart ( (ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသား ) တနည်းအားဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးရော တွဲပြီး လုပ်ကြဖို့ သင်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဆိုတော့ လေးပေါက်ရေ သေးသေးမွှားမွှားလေးက စပြီး ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအထိ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး ထားဖို့က အခရာကျပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ်နဲ့အတူ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၀န်ထမ်းကစလို့ အားလုံး ရေရှည်မှာ ဟန်ချက်ညီညီ ဆက်သွားနိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိလို့ကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကစလို့ နယ်ပယ်အစုံမှာ အနှုတ်ပြပြီး ရေရှည်မှာ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုက်ကားနင်းနေရင်း ဒီခေါင်းစဉ်ဖတ်မိတော့ ကျုပ်မှာ ဆက်နင်းရမလို. မနင်းပဲ နေရမလိုနဲ့စနိုးစနှောင့်..
ကျုပ်ကတော့ နင်းချင်ရင် ဘဲလ်တီးပြီး နင်းတာပဲ.. ကလင်ကလင်..
စနစ်ကြောင့်မဟုတ်.စနစ်ကြောင့်မဟုတ်..တာယာကွဲပြီး စမုတ်တံ ကျိုးနေ၍ဖြစ်အိ..
မနင်းစကောင်း…. မနင်းစကောင်း ပါ ကိုပေါက်ရေ။
ဒါပေမယ့် သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ နင်းတဲ့အထဲ ကိုယ်လည်း ပါနေတယ်။
ကိုယ့်ဆီက အလုပ်သမားတွေ ပေ့ါလျော့လို့မှားတာတွေ့ရင်
နောက်မမှားရဲအောင်ဆိုပြီး ဆူလည်း ဆူတယ်။ အပြစ်လည်း ပေးတယ်။
ကိုယ်စားသုံးတဲ့ဆီမှာ ဆိုရင်လည်း မှားနေရင် ပြန်မလဲခိုင်းရင်တောင် နောက်မမှားရဲအောင် ပိုင်ရှင်သိအောင် အော်ပေးလိုက်တယ်။
အရင်ဆုံးမဖတ်ရပေမဲ့ ပို့စ် မတင်ခင် နားထောင်ခွင့် ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုပေါက်ရေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ တစ်ခါတစ်လေ စားပွဲထိုးလေးတွေ
ပေါ့လျော့ တာရှိသလို စားသောက်သူတွေ ကတ်တီးကတ်ဖဲ့ လုပ်တာလည်း
ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ နှိုင်တိုင်းနင်းချင်စိတ်မပေါက်ဖို့ပါပဲ။
ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ကို အားမနာတမ်း ဝေဖန်ပါရစေ။
ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို တာဝန်ကျေချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ က စေတနာတော့
စေတနာပေါ့လေ။ လိုတာထက်ပိုသွားလောက်အောင် ဘာမှ မစဉ်းစားကြတာ
ကိုယ်ညံ့တာပဲမဟုတ်လား။ အနှိုင်ကျင့်သွားတဲ့ ဧည့်သည် ကိုမောင်မောင်နင်းက
ကျိတ်ရယ်နေတော့မှာပေါ့။ လအ တွေဆိုပြီးတော့လေ။
ဆုံးရှုံးတဲ့ ငွေပမာဏကို မှတ်ထားပြီး
သူတို့ကိုဆုကြေး ပေးတဲ့အခါ တာဝန်ရှိမှုအလိုက် အချိုးကျဖြတ်ပါတယ်။
အဲဒီအမှားဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်မှာ ကျမရဲ့ သွန်သင်မှုညံ့တာမကင်းဘူးလို့ ကျမစိတ်ထဲမှာ သံသယရှိရင်
ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ တစ်ဝက်ကို ကျမကိုယ်ပိုင်သုံးငွေကနေ ထည့်ဝင်ပြီး ကျန်တာကို အလုပ်သမားတွေဆီကဖြတ်ပါတယ်။
ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုမပါတဲ့ နမော်နမဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လည်း အပြစ်အလျောက်ဖြတ်ပြီးရင် အဲဒီငွေတွေကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဝန်ထမ်းစုပေါင်းကထိန်မှာ လှူပါတယ်။
ခုထိတော့ ကိုယ်မနင်းမိသေးဘူးလို့ ကိုယ့်ဖက်ကထင်မိပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် အလိုက်မသိတဲ့ ဧည့်သည်နဲ့တော့ မတိုးဖူးပါဘူး။
အဲဒီတော့ ကိုပေါက်ရယ် ချစ်စကို ရှည်စေ မုန်းစကိုတိုစေတဲ့။ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွါ စိတ်ပေါင်းကိုယ်ခွါ သင့်ရာလုပ်ပေါ့နော။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ခွင့်လွှတ်တတ်ရင် စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။
အပျင်းထူတာရော အားလုံးစုသွားတော့ အရေးကျဲသပေါ့။
ဒီနှစ်ကျနော် ပိုစ်တစ်ပုဒ်မရေးခင်စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာ မိတ်ဆွေတွေကို (အထူးသဖြင့်မန်းဂေဇက်ကပါ)
နားထောင်ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကို ပြန်စီစစ်ပြီးမှ ချရေးပါတယ်။
ဒီပိုစ်လေးကတော့ မာမီ့ဆီကို အလှူငွေသွားယူရင်း မာမီ ကျနော် မယ်ပု သုံးယောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
တကယ်ရေးဖြစ်တော့ ပထမဆုံးအပိုက်နဲ့ဒုတိယအပိုက်သာတူပြီး မပြောပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဧည့်သည်အကြောင်းကို ဖြည့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူတစ်ယောက် မှားတာကို ခွင့်မလွှတ်တတ်သော စိတ်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ထဲမှာပါ ပါတယ်။
မမှားအောင်လုပ်ရင်ရ တာဘဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မှားသူကို အပြစ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဘာသွား သတိရသလဲဆိုတော့ စည်းကမ်းတွေဘာတွေအတိအကျရှိပေမယ့်
ဒီစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာရတဲ့သူ(အထူးသဖြင့် ၀န်ထမ်းကလေးတွေ)မှာလည်း စိတ်ခံစားမူ့တွေရှိတာကို သွားတွေ့လိုက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတော့ ဘယ်စိတ်က အလုပ်ထဲအပြည့်ရောက်မလဲ အဲဒီမှာ အမှားလုပ်မိတော့တာပေါ့။
ကျနော်တို့ က ဒါကိုထောက်ထားပြီး ခွင့်လွှတ်ရင်လုပ်ငန်းပျက်တယ်။
ခွင့်မလွှတ်ရင် လဲလူသားခြင်းကိုယ်ချင်းမစာသလိုဖြစ်ပြီး ကလေးတွေက အားငယ်စိတ်ကနေ မထူးဇာတ်ခင်းသွားနိုင်တယ်၊
ဒီတော့ အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်တော့ သူပေးဆပ်ရမယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ကောင်းကွက်လေးတစ်ခုကိုပြန်ဖော်ပြိး နှစ်ချုပ်တဲ့ဆုကြေးပေးတဲ့အခါမှာ ပြန်ဖြည်ပေးပေ့ါ။
ဒီလိုဆို နေချင်သလိုနေဆိုတဲ့သဘောမရောက်သလို နင်းရာလဲမကျတော့ဘူး။
သူမှားတဲ့အတွက်တော့ ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာ သိမှ သူက မှန်အောင်လုပ်မှာလေ။
ဒါလေးမရေးခင် မယ်ပုနဲ့ကျနော် အများကြီး မတူတဲ့အမြင်နဲ့ဆွေးနွေး။
မာမိကလဲပြောနဲ့ အတော်လေးကို အားရခဲ့ပါတယ်.
ပိုစ်တင်ပြန်တော့လဲ ရွာသူရွာသားတွေရော အခြားဆိုက်မှာရော ဖတ်သူဆွေးနွေးသူများတာကိုတွေ့တော့
ဒီပိုစ်လေး ရေးမိတာကို ကျေနပ်မိပါတယ်။
ဖတ်သူ ရော မန်းသူတွေပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
စားပွဲထိုးက အော်ဒါမှားတာကတော့ –
(အကြိမ်တော်တော်များနေပါပြီ။ မန္တလေးသားတွေက ရန်ကုန်သားတွေကို မယှဉ်နိုင်တဲ့နေရာတွေထဲမှာ အမှိုက်စည်းကမ်းမဲ့ပစ်တာအပြင် စားပွဲထိုးတွေ အော်ဒါမှားတာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။)
ကျွန်တော်သာ ဆိုင်ရှင်နေရာမှာဆိုရင်တော့ ဆူတာ/ဆုံးမတာ/ အပြစ်အနည်းငယ်ပေးတာ လုပ်ရမှာပေါ့..။
ဒါပေမယ့် မှားတိုင်းလျော်ခိုင်းလို့တော့ မတော်ပါဘူး..။ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ပိုက်ဆံဆိုတာ အသက်ပါ..။ အဲဒါကို သွားမထိလေကောင်းလေပါပဲ…။
ဧည့်သည်က တမင်ညစ်တာကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စားသောက်ဆိုင်တခုမှာ ကြီးကြပ်ဖူးလို့ တော်တော်ကြုံဘူးပါတယ်။ အော်ဒါယူတဲ့စံနစ်ကိုလဲ ကိုယ်က ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ အပေါ်မှာ အိတုန်ပြောထားသလို ဧည့်သည်မှာတာကို စာရွက်နဲ့ရေး၊ ပြန်ပြောပြ လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ဒီထဲကပဲ အတင်းငြင်းတာ မူးချင်ယောင်ဆောင်တာ တွေလဲကြုံဖူးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆိုင်ရှင်က စိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းက ကိုယ့်ကို အမြတ်ပေးမယ်လို့ချည်း တွက်မထားသင့်ပါဘူး။
သကြားဘိုးမှားတဲ့ကိစ္စကတော့ တဖက်ကုန်သည်က အဆင့်မရှိတဲ့သူ ဖြစ်လို့ပါပဲ…။
တနေ့ အကြပ်အတည်းကြုံရင် သူ့ကို ကူညီမယ့်သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
သူဟာ သူများရဲ့မိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်၊ သူ့မှာ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး..။
အိမ်ရှင်မြို့ခံတွေရဲ့ သဘောကောင်းမှု့ကိုနင်းသွားတဲ့ ဧည့်သည်မျိုးအတွက်ကတော့….
ဒီတခါ ကိုပေါက် ရန်ကုန်လာမှ ဗိုက်ကလေးကိုခေါ်ပြီး လက်စားသွားချေကြမယ်….
သူက စာထဲသာ စွာရဲတာ အပြင်မှာအားနာတတ်သတဲ့။
ကဲ ဘယ်သူလိုက်မလဲ ရွာသူ တို့ရေ……………………………..
သကြားတဲ့ မှားပို့တဲ့ ကိစ္စ မျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ရောင်းတဲ့ လူဘက်က ဆိုတော့ ကိုယ်မှားတာမို့ သူများကို အပြစ်မတင်တော့ပဲ ကိုယ်သာ ခံရဖို့ အရင်တွေးပါမယ်။
၀န်ထမ်းတွေ ဒီလို မှားတာတွေ ရှိပါတယ်
လစာထဲက ဖြတ်မယ် ဆိုတာ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း တမျိုးလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ထွက်မှာ ဆိုရင် နှမျောတတ်ကြတယ် ပိုပြီး ဂရုပြုလာကြတယ်။ ဒါကြောင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနဲ့ တွဲထားလို့သာ သတိဆိုတဲ့ အရာနဲ့ တွဲပြီး ပေါ့ပျက်ပျက် မလုပ်ပဲ အလုပ်စွမ်းရည်တွေ တက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အလုပ် တခုတိုင်းမှာ ခံစားခွင့် ကော်မရှင် ရတဲ့ အလုပ်မျိုးဆို အားလုံး ကိုယ့်အလုပ်လို သဘောထားပြီး လုပ်ကြတာတွေ ရှိတယ်။
သေးငယ်တဲ့ အမှားဆိုရင်တော့ သူတို့ လျော်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တန်ကြေးကို လစာထဲက ဖြတ်တာမျိုးကိုတော့ သဘောတူပါတယ်။
သိပ်ကြီးမားပြီး တန်ကြေးမျိုး ဥပမာ အဲဒီဝန်ထမ်း လစာ နဲ့ ၅နှစ်နေလို့တောင် မကျေနိင်တဲ့ အနေအထားဆိုရင်တော့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုး မထမ်းခိုင်းသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့ အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်မယ် သေချာ ကိုင်တွယ်တတ်မယ် အဲဒီ လူက ကျေးဇူးသိတတ်မည့်လူမျိုးဆိုရင်တော့ လူယုံတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးမသိတတ်ပဲ ပြန်ကိုက်တတ်မဲ့ လူမျိုးဆိုရင်တော့ နောင်အရှည် အတွက် အလုပ်ကို ၀န်ခံ ကတိနဲ့ ဖြုတ်ပလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အလုပ်ဖြုတ်တယ် ဆိုတာလည်း တကြိမ်မှား ယုံနဲ့ ဖြုတ်ဖို့တော့ မသင့်တော်ပါဘူး။
ဖုန်းကဒ် ပြသနာကတော့ ဆူး အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပိုမပေးချင်လို့ လျော့တာ ၀ယ်ပါတယ် ဆိုမှတော့ ထပ်ပြီး ပိုပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ စိတ်ဆိုးမိမယ် ထင်တယ်။
ဒီကိစ္စက သူမှားပေမဲ့ ကိုယ်အကျိုးရတာ ဖြစ်တော့ တန်ကြေး အပြည့်မဟုတ်ပဲ တ၀က်နဲ့ ညှိမယ် ဆိုရင်တော့ ပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ။
စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အော်ဒါတွေ မှား လို့ လျှော်ကြေးပေးရတာတွေတော့ မသိဘူး မှားလာတာတွေ တော့ ကြုံဖူးတယ်။ အမှားကောင်းမဟုတ်တဲ့ အမှားတွေ ရှိတတ်ပါတယ် ဥပမာ မမှာပဲ လာချပြီး မှား စားမိလို့ ပိုက်ပိုက်ရှင်းရတာမျိုးဆိုရင်တော့ လုံးဝ မကောင်းပါဘူး။ စားနိုင်လောက်တဲ့ မှားခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့ သည်းခံပါတယ်။ အစပ်လုံးဝ မထည့်ဘူး လို့ မှာထားတာကို ငရုတ်သီး ရဲတောက်နေအောင် ထည့်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ သည်းမခံနိုင်ဘူး လဲခိုင်းမှာ အမှန်ပဲ။